एकाएक चर्चित अशोक काठमाण्डाैबाट घरे फर्केपछि देखियो यस्तो अवस्था! – भिडियो सहित – PathivaraOnline
Home > भिडियो > एकाएक चर्चित अशोक काठमाण्डाैबाट घरे फर्केपछि देखियो यस्तो अवस्था! – भिडियो सहित
admin April 26, 2018 भिडियो 0
झापा । तपाई हामीलाई झापा दमकका अशोक दर्जी गित गाएर एकै चोटी ह्वात्तै चर्चामा आए जस्तो लाग्छ । तर उनले यो अवस्था सम्म आईपुग्न, सडकपेटीमा चार बर्ष गित गाएर बिताएका छन् । अहिले उनको भिडियो लगातार युटुबको ट्रेन्डिङमा परिरहेको छ । नाम चलेका ५० वटा भन्दा बढी युटुब च्यानलहरुले भिन्न भिन्न शिर्षकमा अशोकका भिडियोहरु अप्लोड गरेका छन् । उनी यतिबेला सर्वत्र चर्चाको शिखरमा रहेका छन् ।
युटुब च्यानलहरुकै कारण उनले आफ्नो सुनौलो भबिश्य प्राप्त गरेका छन् । उनको सडक पेटीको गायन यात्रा अहिले गित रेकर्डगर्ने सम्मको स्थितीमा उनलाई पुर्याएको छ । असोकका परीवारमा आमा बुवा एक दिदि र दुइ बहिनि रहेका छन् । बुवा पुन पाचकोटी दर्जि आमा ललिता दिदि काजल बहिनिहरु शिता र मुस्कान रहेका छन् । असोक सगै गित रेकडिङ पछि घर आएका बुवाले काठमाण्डोमा आफ्नो छोराले स्वर सुकिन्जेल क्यामरा अगाडी बोलेको देख्दा छोराले सुख पाएको होकी दुख पाएको ठम्याउनै गारो भएको बताए ।
प्रेङ्क भिडियत्र बनाउन खोज्दा यी युवाले खाए रामधुलाई, प्रेङ्क भन्दा पनि छाडेनन् (भिडियो हेर्नुस्)